Waxaa maal galiyay Ururka Warshadaha Kiimikada ee Shiinaha oo ay fulisay shirkadda Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd., aqoon isweydaarsiga ku saabsan horumarinta tayada sare ee warshadaha dhexdhexaadka dawooyinka ayaa lagu qabtay Dezhou, Gobolka Shandong. Mawduuca shirku waa “is-dhaafsiga xuduudaha, is-dhexgalka a ...
Kiimikada 'Zouping Mingxing Chemical' ayaa horay ugu sii socota warshadda kiimikada dhijitaalka ah
Khadka wax soo saarka otomaatiga ah ee hortayada ka socda ayaa ah khadka wax soo saarka caqliga ee la casriyeeyay oo loo beddelay Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd. oo leh maalgashi 100 milyan yuan ah sannadkan. Waqtigan xaadirka ah, alaabada kiimikada waxaa loo soo saaray wax soo saar dufcado ah. Sida laga soo xigtay maareeyaha guud ...
Horumarinta warshadaha API iyo warshadaha dawooyinka waa kuwo aan lakala sooci karin, xitaa iswaafaqsan. Waxaa la fahansan yahay in kormeerka adag ee deegaanka dartiis, shirkadaha sameeya API ay u baahan yihiin inay hagaajiyaan nidaamka ama yareeyaan miisaanka wax soo saarka iyadoo lagu saleynayo xaaladaha asalka ah, kuwaas oo ka bixi doona ...